udza mashoko – Ernest Bevin College
Chikuru: Ms Tracy Dohel
Runhare: 020 8672 8582
Kubvunza uye zvikumbiro zvekushanya kunofanira kutaurwa nazvo
Ndokumbirawo ubvunze koreji iyi kana uchida kukumbira mapepa emakopi chero ruzivo rwakabudiswa pawebsite yekoreji.
Deputy Principal: Ms N. Patel
Ivo vanogona kufonerwa kukoreji pane 0208 672 8582. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve SEND kupa kukoreji tinya pano
KUTI Uwane Sei US
Nzira 155, 219, 249, 319, 355, 690 vese vanopfuura pedyo neKoreji.
Kuti uwane rumwe ruzivo penya panhare kune iyo TFL webhusaiti pazasi (iwe uchafanirwa kuisa yedu postcode SW17 7DF)
Isu tiri fupi mafambiro kubva ku Tooting Bec tube station.
Kufamba Mafambiro kubva kuna Tooting Bec:
Buda chiteshi chinanga kuUtatu Road, tendeuka kurudyi uye ufambe uchikwira Utatu, kuyambuka pakufamba kweanofamba netsoka neRutatu Road / M&S garage. Tora yekutanga kuruboshwe muGlenburnie Road ichipfuura nemaNewsagents & cafe, then first right into Langroyd Road. Tevedza mugwagwa uno kutenderera kuruboshwe (inova Brenda Road).
Pakupera kweBrenda Road uri kutarisana neErnest Bevin College. Shandisa iyo yekufamba netsoka kuyambuka uye kurudyi kurudyi yekupinda kana kuruboshwe kuti upinde munharaunda yemitambo nepaki yemotokari (manheru & nezvirongwa chete).